Hiob 30 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Hiob kaa sɛnea n’asetena asesa (1-31)
Nnipa hunu serew no (1-15)
Ná ɛyɛ no sɛ n’asɛm mfa Onyankopɔn ho (220, 21)
“Me were ayɛ tumm” (30)
30 “Afei de nkurɔfo serew me,+Nnipa a manyin sen wɔn.Saa nkurɔfo no, anka meremfa wɔn agyanomNka nkraman a wɔwɛn me nguan mpo ho. 2 Tumi a ɛwɔ wɔn nsam no, dɛn na wɔde yɛ maa me? Wɔn ahoɔden asa. 3 Ohia ne ɔkɔm nti, wɔayɛ mmerɛw;Na asaase a ɛso awo so na wonya biribi we,Baabi a asɛe na ayɛ amamfo no. 4 Wɔtetew nkyene ahaban wɔ wura mu;Sare so nnua ntini na ɛyɛ wɔn aduan. 5 Wɔpam wɔn fi nnipa mu;+Nkurɔfo huro wɔn sɛnea wohuro ɔkorɔmfo. 6 Wɔtete subon mu,*Asaase mu ntokuru ne abotan mu ntokuru mu na wɔhyehyɛ. 7 Wɔteɛteɛm wɔ nnua mu,Na wɔboaboa wɔn ano wɔ nsasono mu. 8 Wɔyɛ agyimifo mma, ne wɔn a wonni din mma.Enti wɔapam* wɔn afi asaase no so. 9 Nanso afei de, wɔto nnwom de serew me;+Wobu me animtiaa.*+ 10 Wɔtan me, na wɔtwe wɔn ho fi me ho kɔ akyirikyiri;+Ɛreyɛ ara ni, na wɔatew ntasu agu m’anim.+ 11 Esiane sɛ Onyankopɔn agye m’ahoɔden* na wabrɛ me ase nti,Nea obiara pɛ biara ɔka si m’anim.* 12 Wɔsɔre wɔ me nifa so sɛ aturuturafo kuw,Na wɔma miguan,Na wogye ban wɔ me kwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛsɛe me. 13 Wɔsɛe m’akwantempɔn,Na wɔma m’amanehunu yɛ kɛse;+Obiara nni hɔ a osiw wɔn kwan.* 14 Wɔba me so te sɛ nea wɔnam ɔfasu a ntokuru akɛse deda mu mu;Wɔba me so wɔ m’amanehunu mu. 15 Nneɛma a ɛyɛ hu abu afa me so;Wɔapam m’anuonyam sɛ mframa, Na me nkwagye ayera sɛ omununkum. 16 Seesei de, me nkwa* rehi wɔ me mu;+Amanehunu nna+ aso me mu. 17 Me nnompe mu tutu me* anadwo;+Na emu we me a ennyae da.+ 18 Emu den nti, m’ataade asesa;*Emia me te sɛ m’ataade kɔn. 19 Onyankopɔn atow me akyene atɛkyɛ mu;Awiewie me sɛ mfuturu ne nsõ. 20 Misu frɛ wo sɛ boa me, nanso wunnye me so;+Mesɔre gyina hɔ, nanso wohwɛ me hãã. 21 Woadan w’akyi akyerɛ me yayaayaw;+Wode wo nsa mu ahoɔden nyinaa atow ahyɛ me so. 22 Woma me so, na woma mframa huw me kɔ;Afei woma mframa a ano yɛ den de me kɔ soro ba fam.* 23 Minim sɛ wode me bɛkɔ owu mu;Wode me bɛkɔ ofi a ateasefo nyinaa behyia wɔ hɔ no. 24 Nanso obiara nni hɔ a ɔbɛbɔ onipa a wabubu,*+A ɔresu hwehwɛ mmoa wɔ n’amanehunu bere mu. 25 Wɔn a wɔwɔ amanehunu mu no,* minsu mmaa wɔn anaa? Minnii* ahiafo ho awerɛhow anaa?+ 26 Ná m’ani da so sɛ adepa bɛba, nanso bɔne na ɛbae;Mehwɛɛ kwan sɛ hann bɛba, nanso esum na ɛbae. 27 Me yam a ɛhyehye me no annyae;Amanehunu nna bɛtoo me. 28 Awerɛhow mu na menantew;+ m’abam abu.* Mesɔre wɔ asafo no mu, na misu hwehwɛ boafo. 29 Sakraman na abɛyɛ me nua,Na sohori mma mmea na abɛyɛ me nnamfo.+ 30 Me were ayɛ tumm, na ɛrewaewae fi me ho;+Ahohuru* ama me nnompe ahyew. 31 Me sanku wɔ hɔ ma wɔn a wɔredi awerɛhow nko ara,Na m’atɛntɛbɛn wɔ hɔ ma wɔn a wɔresu.
^ Anaa “Wɔtete subon nsianee so.”
^ Nt., “wɔde mpire apam.”
^ Nt., “Wɔde me bu bɛ; Wɔbɔ me din ka asɛm.”
^ Nt., “agow m’agyan hama mu.”
^ Anaa “Wɔnhyɛ wɔn ho so wɔ m’anim; Nkurɔfo yi wɔn ano nnareka wɔ m’anim.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wonhia obiara mmoa na wɔayɛ saa.”
^ Nt., “Wotu me nnompe mu tokuru.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “M’amanehunu kɛse nti, me nipadua asesa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wode ahum nan me.”
^ Nt., “nea asɛe sum hɔ.”
^ Anaa “Wɔn a ayɛ den ama wɔn no.”
^ Anaa “Me kra nnii.”
^ Nt. “owia hann nni hɔ.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Atiridii.”